> Magan galyo > Daljooga > Shaqada
Shaqada shakhsiga magangalya doonka ah loo ogolyahay inuu kashaqeeyo waxay kuxirantahay magangalyada loo ogolaaday nooca aytahay.
Dadka waydiista magangalyo
Dadka magangalyadoonka ah looma ogola suwiska inay kashaqeeyaan saddex ilaa lixda bilood ee ugu horreysa joogitaankooda suwiska.
Waqtigaa kadib waxay kashaqayn karaan amba loo ogolyahay inay kashaqeeyaan qaybahan hoos kuxusan haddii shaqaale looga baahdo :Hoteellada, Dhismaha,Caafimaadka « Hosbitaallada iyo Xannaanada dadka gaboobay » amba Beeraha.
Haddii boos kabannaanaado qaybaha aansoo sheegnay, shakhsi suwis ah amba ajnabi haysta sharciga dagganaanshaha B amba C oo danaynaya amba raba lawaayo muddo soddon beri ah(30maalmood), xafiisyada shaqadu way ufasaxaan dadka magangalyo doonka ah qofkii raba.
Cahdiga barashada farsamooyinka lagu shaqaysto ee loo ogolyahay dadka magangalyada waydiista suwiska way xaddidantahay(koobantahay) sida shaqooyinkuba oxaddidanyihiin.
Dadka suwisku u aqoonsado qaxooti waaloo ogolyahay qaybaha shaqada oodhan mana xaddidna.
Dadka suwisku u ogolaado magangalyo meelkugaadh ah.
Dawladaha hoose (kaantoonnada) ayaa leh awoodda loogu ogolaado shaqooyinka dadka sharciga noocaa ah haysta si ay ushaqaaleysiiyaan ; laakiin shaqo madax bannaan (shaqo shakhsigu gaar u abuurtay) dawladaha kaantoonnadu waxay ogolaadaan ookaliya haddey faa’iido kasoo galeyso, dadka shaqada raba inay sameeyaanna maaliyadna haystaan xirfaddeedana leeyihiin.
Cashuurta iyo caymisyada bulshada
Dadka magangalyada kujooga suwiska ee shaqeeya waxay bixiyaan cashuuraha iyo caymisyada waddanka ee shakhsi kasta oo camal haystiba awbixiyo loona yaqaanno ( impôts). Cashuurta maalka amba mishaarka. Iyo caymisyadakale hoos kuqoran.
Caymisyada bulshada ; sida caymiska dadka hawlgabka ah, una kalabaxa : hawlgabka da’da loona yaqaanno AVS, hawlgabka bukaanka, naafada iyo shilka loona yaqaanno AI ; iyo caymiska camal la’aanta.
Waxa kale ooyku qasbanyihiin iney sooceliyaan kharashkii kubaxay noloshooda intay kunoolaayeen suwiska ee ay ahaayeen bilaa camal (cayrta).
Cashuur gaar u ah dadka magangalyadooka ah
Dadka magangalya doonka ah ee aan weli go’aan laga gaadhin iyo kuwa loo ogolaaday magangalyada meelkugaadhka ahee shaqeeya waxa laga jaraa mishaarkooga bilkasta boqolkiiba toban (10%) waxa kagooya shirkadda amba shakhsiga looshaqeeyo
Waxa ladhigaa lacagtaa akownto aymaamusho dawladda federaalka suwiska oo aanwaxba laga isticmaali karin.
Lacagtaasi waa cashuur siyaado ah oolaga qaado dadka kor kuxusan; waqtiga laga goynayo bilkasta waa saddex sano ilaa toban sannadood. Waxa loogu talo galay cashuurtani inay daboosho kharashkii kubaxay intay joogeen suwiska, lagasoo bilaabo waqtigii ay iska diwaangaliyeen xarumaha diwaangalinta ilaa ayshaqo bilaabeen iyo haddii waddanka laga celinayo kharashka kubaxaya.